Wararka Maanta: Talaado, Mar 10, 2020-Dowladda Ethiopia oo joojisay saamigii ganacsi oo ay ku lahayd dekeda Berbera
Itoobiya waxay saamigaan ka heshay shirkadda DP World ee fadhigeedu yahay dalka Imaaraadka Carabta (DP World) iyo Maamulka Somaliland, iyadoo ku bedelatay si ay u horumariso jidka isku xidha Berbera oo ah irrid ganacsi oo laga helo Somaliland.
Ethiopia waxay haatan qorshaheeda u wareejisay dekeda Suudaan, iyadoo la gashay heshiis ku saabsan horumarinta dekedda Suudaan.
Heshiiska waxaa kamid ah, in Shirkadda Adeegyada Maraakiibta iyo Adeegga saadka ee Itoobiya (ESLSE) ay noqon doonto hay'ad loo idmaday inay horumariso xarunta dekeda ee Suudaan.
Itoobiya waxay sidoo kale danaynaysaa in ay saami ka hesho Jabuuti waxayna labada dal ku heshiiyeen in ay kala beddeshaan saamiyo ku yaal dalalkooda.
Waxay kaloo sheegtay inay danaynayso inay kala shaqeyso Kenya iyo Ereteriya horumarinta dekedahooda.
3/10/2020 11:46 AM EST